Sidee Xogta Duulaantu u Caawineysaa Suuqgeynta Kanaal Badan | Martech Zone
Sidee Xogta Duulaantu u Caawineysaa Suuqgeynta Kanaal Badan
Arbacada, Juun 17, 2015 Talaado, Juun 16, 2015 Douglas Karr
Macaamiishaadu way kugu soo booqanayaan - iyagoo ka socda moobilkooda, kumbuyuutarradooda, kiniiniga ay ku shaqeeyaan, iyo miisaska gurigooda. Waxay kugula xidhiidhi doonaan adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada, emaylka, moobaylkaaga, boggaaga iyo meheraddaada.
Dhibaatadu waxay tahay in, illaa aad uga baahan tahay gelitaan dhexe meel kasta, xogtaada iyo raadraacaaga ayaa ku kala jaban dhammaan noocyada kala duwan Analytics iyo goobaha suuq geynta. Barxad kasta, waxaad fiirineysaa aragti aan dhameystirneyn oo ku saabsan xogta iyo dhaqanka la xiriira macaamilka ama rajada.
Waa maxay Gudbinta Xogtu?
Xog Ku Saarida Xogta waxay isku toosinaysaa xogta macmiilkaaga ilaha xogta kaladuwan iyo xitaa waxqabadka dukaanka iyadoo la waafajinayo saxeexyada dhijitaalka ah ee ku jira xogta oo dhan. Codsiyada moobiilka, tusaale ahaan, waxay awoodaan inay aqoonsadaan furaha la xiriira qalabka. Ganacsiyada iyo dadku waxay noqon karaan kuwo dhul ahaan loo aqoonsan karo lagana aqoonsan karo goobo gaar ah oo IP ah. Kaararka daacadnimada, cinwaanada emaylka iyo galitaanka ayaa gacan ka geysan kara aqoonsiga sidoo kale.
Xogta lasocota waxay si fudud u fududeyneysaa suuq geynta dhowr-kanaal, adiga oo awood kuu siinaya inaad abuurto khibrado macmiil oo wanaagsan isla markaana aad keento natiijooyin badan oo la qiyaasi karo. Wadada LiveRamp
Bixiyeyaasha Gudbinta waxay la mid noqon karaan macaamilka dhammaan ilaha xogta waxayna bilaabi karaan raadinta xogta aan la aqoon illaa iyo inta booqdaha ka muuqanayo aqoonsigiisa iyo astaamaha ay ku xiran yihiin. Shirkadaha sida LiveRamp waxay ururiyaan xogta guud ahaan a tiro ka mid ah xayeysiinta xisbiga saddexaad iyo suuqgeynta suuqgeynta si kor loogu qaado astaamaha loona xaqiijiyo saxsanaantooda.
Tani waxay siisaa qaab aad u awood badan oo lagu fahmo sida macaamiishaadu u dhaqmayaan, suuqgeynta la beegsan karo iyo gaar ahaan goorta iyo kanaalka loo suuqgeynayo.
Tags: xogta fuulaaddaxogta saaranbeerkamulti-channelsuuq geyn farabadan
9 Khaladaadka Bogga Aad Degto Waa Inaad Ka Fogaato
Inaad Adeegsato Khibrad Shaqsiyeed Adiga Ayaa Ku Dhaawaceysa